Soo qaado xirmadan vector-ka oo bilaash ah Kirismaska ​​| Abuurista khadka tooska ah
Maanta waxaan la nimid hadiyado saadaalinaya Navidad mahadsanid Freepik Taasi gudaha waxay ku siisaa xirmadan vector-ka mawduuca tayo sare leh ee bilaashka ah loogu talagalay akhristayaasha shabakadda 'Creativos Online'.
Labadaba waad u isticmaali kartaa xubno go'doon ah, halabuurro, astaamo ama kaararka boostada khadka toos ugu dir ama wax kastoo maskaxdaada ku soo dhaca. Xaqiiqdii waad waalaysaa in yar si aad uhesho wax xusid mudan oo ka dhex muuqda kuwa caadiga ah ee aan badanaa ka helno internetka. Waxa Freepik na siiso waa daaweyn aad u fiican waxaadna u adeegsan kartaa inaad sameyso halabuurrada ugu fiican ee suurtogalka ah.
Gabi ahaanba waa bilaash sidaa darteed waxaad heli kartaa waxyaabaha ugu caansan ee kirismaska ​​sida shumacyo, sanaadiiqda hadiyadaha, jalaska caadiga ah, kubbadaha geedka kirismaska, xiddigaha, barafleyda, Santa Claus, kabaha lagu keydiyo hadiyadaha ugu fiican ama xitaa koofiyad Kirismas ah. Tani maahan wax ka badan tusaalooyinka qaarkood, maadaama aad si dhib yar uga heli doontid baakad vector ah sidan oo kale lacag la'aan shabakadda.
Ma sidaas baa si qurux badan loo naqshadeeyay loona istaago midabkooda iyo taabashadooda guusha leh ee soo jireenka ah intay casri yihiin. Astaamaha sida geedka cagaaran, barafka ama Santa Claus laftiisa waa kuwo aad u qosol badan waxayna dhoola cadeyn ku sameyn doonaan xubinta qoyska ka tirsan ee qaata kaarka boostada ama walxaha qurxinta ee kaladuwan ee aan inta badan isticmaalno Kirismaska. Wali waa 21-ka Noofambar, markaa waxaa jira waqti badan oo aad si wanaagsan ugu adeegsan karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » Soo degso xirmooyinkan tayo-sare leh ee kirismaska ​​ee bilaashka ah xushmadda Freepik
Waxaan isku dayay inaan soo dejiyo xirmada masiixiga waxbana ma soo bixin